याे पनि पढ्नुहाेस्, घरेलु उपचार बाट यति धेरै राेगहरूकाे छुटकारा जानेर चकित पर्नु हुनेछ - ज्ञानविज्ञान
याे पनि पढ्नुहाेस्, घरेलु उपचार बाट यति धेरै राेगहरूकाे छुटकारा जानेर चकित पर्नु हुनेछ
अधिकांशले स्वास्थ्यलाई भन्दा खानपानलाई ध्यान दिने चलन छ । यस्तो खानपानले समस्या बनाएमा गाउँघरमा भनेको वेलामा स्वास्थ्यकर्मी पाउन पनि समस्या पर्छ ।
खाएको केही समयपछि पनि देखिने विभिन्न स्वास्थ्य समस्याको घरेलु उपचार गर्न सकिएमा धेरै सहज हुन्छ। स्थानीय रूपमा सजिलो एवं सर्वसुलभ पाइने निम्न जडीबुटीहरू तथा आयुर्वेदिक औषधिहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ।
हर्रो, बर्रो र अमलाबाट निर्मि त्रिफला चूर्ण ३ देखि ६ ग्राम राति सुत्ने वेलामा मनतातो पानीसँग खाँदा फाइदा गर्छ।
बेलको काँचो फलको गुदी आगोमा पकाएर महसँग पाउडर (चूर्ण) ३ देखि ६ ग्राम, रस १० देखि २० मिलि सेवन गर्नाले दिसाको साथमा रगत आउने, रगतमासी हुने समस्या पनि समाधान गर्छ। साधरण झाडापखलामा जिराको धुलो ३ ग्राम प्रयोग गर्न सकिन्छ।
वाकवाकी एवं बान्ता भएमा
वाकवाकी, उल्टी हुँदा दालचिनी वा सुकमेल प्रयोग गर्न सकिन्छ। शुद्ध दालचिनी वा सुकमेलका धुलो १ देखि ३ ग्राम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अदुवाको रस वा सुकेको अदुवाको धुलो सेवन गर्दा पनि हुन्छ।
पेट दुखेमा वा पेटमा ग्यास भरिएमा
ज्वानो धुलो ३ देखि ५ ग्राम प्रतिदिन दुईपटक कुनै खाना वा अन्य पेय पदार्थमा राखेर खान सकिन्छ। पुदिनाको रस १०-२० मिलि र लेदो १-३ ग्राम प्रयोग गर्न सकिन्छ। बोझोको चूर्ण १२५ देखि ५०० मिग्रा र टुक्रा ५०० मिग्रा प्रयोग गर्न एवं चुस्न सकिन्छ।
टिमुरको धुलो अजीर्ण र ग्यास हटाउन १ देखि २ ग्राम साँझ–बिहान प्रयोग गर्दा फाइदा गर्छ। बच्चाहरूको साधारण पेट दुखाइमा, अजीर्ण, अरुचि रोगमा तुलसीको पातको रस र अदुवाको रस मिसाएर दिँदा फाइदा हुन्छ।
ग्यास्ट्राइटिक (अम्लपित्त भएमा)
अमला, मेथी, कुरिलो जराको धुलो, जेठीमधुमध्ये कुनै एक जडीबुटीको धुलो ३ ग्रामसम्म साँझ–बिहान प्रयोग गर्दा उपयोगी हुन्छ।
असुरोको पात वा फूलको रस १० मिलि र सुपको रूपमा ४० देखि ८० मिलि प्रयोग गर्न सकिन्छ। ताजा पातको रस निचोरेर मह वा अदुवाको रससँग मिलाएर खाने गर्दा पुरानो खोकी लागेको समस्या समाधान हुन्छ। रुघाखोकी लाग्दा ज्वानोको झोल बनाएर खाने चलन पनि छ। यसले खकार निकाल्न मद्दत गर्छ।
अदुवाको धुलो २ देखि ३ ग्राम दिनको दुईपटक श्वासप्रश्वास समस्या भएमा प्रयोग गर्ने सकिन्छ। सफा तुलसीको पातलाई पिनेर प्राप्त हुने रस (५–१० मि.लि) मा मह मिसाएर दिनको दुईदेखि तीनपटक सेवन गर्दा सर्दी, खोकी, रुघा, निमोनिया, दम, आदिमा प्रभावकारी हुन्छ।
जटामसी, निम वा सर्पगन्धा जडीबुटीको धुलो १ देखि ३ ग्राम साँझ–बिहान प्रयोग गर्दा फाइदा गर्छ। लसुनको लेदो १ देखि २ ग्राम नियमित सेवन गर्दा रक्तचाप घटाउन फाइदा गर्छ।
मधुमेह (चिनीरोग बढेमा)
चिनीरोगीहरूले मेथीको रस खाने बानी गर्दा प्रभावकारी हुन्छ। मधुमेह तथा पिसाबसम्बन्धी रोगमा तुलसीको बिज पिँधेर तयार गरिएको लेदोलाई १–३ ग्रामसम्म दिनमा दुईपटक सेवन गर्दा पनि फाइदा गर्छ। गुर्जोको लहरा, तेजपात, बेसार आदिको धुलो ३ ग्रामसम्म नियमित रूपमा प्रयोग गर्दा फाइदा हुन्छ।
तर कुनै जटिल स्वास्थ्य समस्या आउँदा र औषधि किनेर सेवन गर्नुपर्दा चिकित्सक एवंम स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग सल्लाह गर्न जरुरी छ । आयुर्वेदिक औषधिहरू प्रयोग गर्दा खानपानलाई पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।
मधुमेह, उच्च रक्तचाप र अन्य जीर्ण रोगीहरूले आहारविहारलाई ध्यान नराखी औषधि वा जडीबुटीको धुलो मात्र सेवन गर्दा प्रभावकारी हुँदैन। जडीबुटीको विश्वासमा परेर धेरै दिनसम्म खुला रहेका, म्याद नाघेका र गन्ध एवं स्वाद बिग्रेका औषधि प्रयोग गर्दा नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।
Topics #घरेलू उपचार #घरेलू उपचार बाट राेगहरूकाे छुटकारा #पेट दुखेमा घरेलु उपचार #पेटमा ग्यास भरिएमा घरेलु उपचार
Don't Miss it भुटेको एक पोटी लसुन खानुहोस् र यि फाइदाहरु उठाउनुहोस् !
Up Next के तपाइकाे पनि उभिएर खानेकुरा खाने बानी छ ? होसियार !
विज्ञानले विहान स्वास गन्हाउने समस्यालाई ‘ह्यालिटोसिस’ भन्छन् । दाँत सफा नगर्ने बानीले गर्दा, सुत्ने तरिका नमिल्दा अनि केही खानेकुराह खाँदा…
दुब्लो भएका कारण चिन्तित हुनुहुन्छ ? यस्तो छ घरेलु विधिद्वारा मोटाउने तरिका
दुब्लो शरिर भएका मान्छेलाई कसरी मोटो हुने भन्ने चिन्ता हुन्छ । दुब्ला मानिसहरु उमेरभन्दा अघि पाका देखिने हुदा उनीहरुलाई चिन्ता…
महिलामा किन बढी देखिन्छ ढाडको बाथ रोग ? यस्ता छन् यसका लक्षण र बच्ने उपाय
बाथ रोग भन्नाले शरीरको रोग निरोधक शक्तिले आफ्नै शरीरको अंगलाई असर गरेर हुने रोग भन्ने बुझिन्छ । बाथ रोग धेरै…
आखा किन फरफराउछ ? के तपाईको आखा बेस्सरी चिलाउने गर्छ ? यसरी आखाको हेरचाह गर्नुहोस्
हाम्रो आँखा बेला बेला फरफराइ रहेको हुन्छ । यो फरफराइ केही सेकेण्डसम्म या केही घण्टासम्म जारी रहने हुन्छ । कसै–कसैमा…
तपाईको कपाल कतै खस्रो त छैन ? यदि छ भने यसरी सजिलै नरम बनाउन सक्नुहुन्छ
१. मुसुरोको दाललाई पानीमा भिजाएर कपाल धुँदा यसले कपाललाई नरम तथा चम्किलो बनाउँछ । २. गिलास पानीमा एक चम्चा चियाको…
Closeup of young woman with measure tape
यस्ता छन्, तौल बढाउने १० तरिका
१. यदि तपाई स्वस्थ तरिकाले तौल बढाउन चाहनुहुन्छ भने बिहानको नास्ता ‘हेभी’ हुनुपर्नेछ । बिहानको यसप्रकारको नास्ताले दिनभर उर्जावान् बनाइरहन्छ…
महिलाको शरीरमा सेता धर्सा बढी किन देखिन्छ ? जानी राखौ
हानिकारक हुनसक्छ यी खानेकुरा पकाए
खानेकुरा पाउनसाथ हामी जथाभावी खाइदिन्छौ । त्यसले पाचन प्रक्रियामा असर गर्छ । कतिपय खानेकुरा शरीरका लागि हानिकारक हुन्छ । कति…
शरीर मोटो भएमा बच्चा जन्माउन असक्षम रहन्छन महिलाहरु
आजकल धेरै जसो महिला तथा पुरुषहरु छिट्टै बच्चा जन्माउन चाहादैनन । कुनै पनि परिवार नियोजनको साधन प्रयोग नगरेका दम्पतीहरुको विवाह भएको…
डिप्रेसनबाट बच्ने उपाय, यस्ता छन्
१. स्वस्थ खाना र व्यायाम स्वस्थकर र सन्तुलित खानपानबाट मन खुशी रहन्छ । यसैगरी, कैयौ वैज्ञानिक सोधले प्रमाणित गरेका छन्…
दारी पाल्नेहरूमा बढ़ी आत्मविस्वास हुन्छ – युनिभर्सिटी अफ वेष्टर्न अष्ट्रेलिया
कोही पुरूष दारी पाल्न मन पराउँछन् त कोही दिनहुँ दारी काटेर आमानिसहरुका अनौठा अनौठा शोख हुन्छन् । कसैलाई आफ्नो कपाल…
पिलोको समस्या घरेलु उपायले नै ठिक पार्ने
शरीरको कुनै हिस्साको रौं टुट्ना बाट उत्पन्न हुने, पिलो एक प्रकारको फोको हो । अन्यभन्दा अलिक फरक र पीडादायी हुन्छ…
भान्छामा लुकेका हुन्छन् तौल घटाउने यी सामाग्री जानिराखाैँ
धेरैजसो मानिसहरु आफ्नो भद्दा शरीरका कारण निकै तनावमा हुन्छन् । यसबाट छुटकारा पाउन डाक्टरको औषधीमा निर्भर हुन्छन् भने आयुर्वेदिक पद्धतीलाई…
घर संसार (5)
घरेलु उपचार (34)
संस्कृति परम्परा (18)
सामान्य ज्ञान (52)